ပန်းတို့၏သဘော… Flowers on special occasions | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » ပန်းတို့၏သဘော… Flowers on special occasions
ပန်းတို့၏သဘော… Flowers on special occasions
Posted by kai on May 7, 2016 in Ideas & Plans, Myanmar Gazette, Opinion - Op-ed, Think Tank | 10 comments
Flowers on special occasions
Wedding Seasonal flowers would be the best option. Pale, delicate flowers may work better in the spring while dark, rich coloured flowers would work for fall.
Anniversary Surprise is the key here. Again, seasonal flowers are the best bet. Options include combining with gourmet or fruit basket. As for gifting flowers to friends and relatives on the occasion of their anniversary, try something that fits in with their personalities. Whatever it is, make sure to addapersonal touch to the flowers.
Birthday Anything bright and colourful would be appropriate. Using the birthday personÂ´s favourite flower is alwaysagood idea
Christmas Popular Christmas flowers include the Christmas cactus with its green leaves and pink or red flowers, holly with green leaves and red berries and poinsettia plants with green leaves and red or white flowers, Christmas Amaryllis & more. Learn more at Christmas Flowers Guide.
Easter White Zantedeschia aethiopica (Calla Lily), white Roses, white standard Carnations, and lime green Euphorbia robbiae.
Thanksgiving Chrysanthemums, gerbera daisies, roses, carnations, alstroemeria, lilies, wheat, solidago, monte casino, marigolds.
Halloween A combination of the traditional jack-o-lantern with trendy flower bouquets.
Friendship Day Yellow roses
Valentine Day Valentines day Roses – Various shades of red, bright whites and yellow. Also you may be interested in creatingaValentines Day rose bouquet by yourself.
Father´s Day A bunch of blooming Roses or some sturdy and long-lasting Tropical Flowers
Mother´s Day Carnations, Scented narcissi, lily of the valley (Convallaria) and all Mother’s day flowers other than Carnations. Also you may be interested in creatingaMother’s day carnation bouquet by yourself.
New Born Brightly colored flowers areaperfect way to introduce the new born to our world. Try sending some of the most jovial flower gift and lively bouquets to giveawarm welcome to the little one.
Tiny Tots Regular flower arrangement with special baby features and accessories like teddies and baloons.
Sympathy & Funeral Gladiolas, White Carnations and White Daisies.
Just Like That The perfect way to addalittle sparkle to someone’s day. Bouquet should include an assortment of flowers like chrysanthemum, mini carnations, purple statice, and greenery.
Get Well Bright cheery flowers, usually dark red or yellow with innovative vases or healthy gourmet basket.
Housewarming Simple beauty never goes out of style. Justabunch of fresh flowers inavase filled with water as an add on to any other gift would look elegant.
Graduation Bunch of lilies of different colors. A combination of red, yellow and blue would look spectacular.
မြန်မာတွေလည်း.. ပိတောက်တို့..။ ခရေတို့..။ ငုတို့..။ သဇင်.. ကန်ု့ကော်၊ စိန်ပန်းတို့နဲ့.. အဲလိုလေးသတ်မှတ်လုပ်ထားသင့်တယ်..။
ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်.. ကိုယ်တိုင်စီကလုပ်ကြမှကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်တာပါ..။ ဒါကမှ.. မျိုးချစ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်..။
အပေါ်ကစာတွေ ကို အောက်က မြန်မာ၁၂လရာသီပန်းတွေနဲ့တိုက်ပြီး.. ဘယ်သူဘာသာပြန်ပေါင်းရေးပေးမလဲ..။ မြန်မာ၁၂လရာသီနဲ့.. ပန်းစည်းပန်းကုံး.. ပွဲတော်.. အထိမ်းအမှတ်.. ဘယ်သူသုတေသနလုပ်.. ပြုစုပေးမလဲ.. ။
မြတ်လေး၊ ခတ္တာ နှင့်
ရွှေရင်းမာ* ၊ ကြာ ခ၀ဲ
ဖွဲ စ နှင်းလျှံ၊
ခွာတန် နှင့် ပေါက်လဲ။
တန်ခူးလ ။ ။ သင်္ကြန်ပွဲတော်။
ရာသီပန်း ။ ။ ကံကော်ပန်း။ ပိတောက်ပန်း။
ကဆုန်လ ။ ။ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်။
ရာသီပန်း ။ ။ စကားဝါပန်း။
နယုန်လ ။ ။ စာပြန်ပွဲတော်။
ရာသီပန်း။ ။ စံပယ်ပန်း။
၀ါဆိုလ ။ ။ ရဟန်းခံရှင်ပြုပွဲ၊ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ။
ရာသီပန်း ။ ။ ပုန်းညက်ပန်း။
၀ါခေါင်လ ။ ။ စာရေးတံမံပွဲတော်။
ရာသီပန်း ။ ။ ခတ္တာပန်း။
တော်သလင်းလ ။ ။ လှေပြိုင်ပွဲတော်။
ရာသီပန်း ။ ။ ယင်းမာပန်း။
သီတင်းကျွတ်လ ။ ။ မီးထွန်းပွဲတော်။
ရာသီပန်း ။ ။ ကြာပန်း။
တန်ဆောင်မုန်းလ။ ။ ကထိန်ပွဲတော်။
ရာသီပန်း ။ ။ ခ၀ဲပန်း။
နတ်တော်လ။ ။ စာဆိုတော်ပွဲ။
ရာသီပန်း ။ ။ ဂမုန်းပန်း။ သဇင်ပန်း။
ပြာသိုလ ။ ။ မြင်းခင်းသဘင်ပွဲတော်။
ရာသီပန်း ။ ။ ခွာညိုပန်း။
တပို့တွဲလ ။ ။ ထမနဲပွဲတော်။
ရာသီပန်း ။ ။ ပေါက်ပန်း။
တပေါင်းလ ။ ။ သဲပုံစေတီပွဲတော်။
ရာသီပန်း ။ ။ သရဖီပန်း။
ပန်းနဲ့ အလှမ်းဝေးနေသူ တစ်ယောက်မို့ ခွင့်လွှတ်ပါခိုင်
အပေါ်က ဟာမိုးး ကို
အောက်ဘက် က မြန်မာ ပန်းတွေနဲ့ အစားထိုးရေးပေးးရမှာ ကို ပြောတာလားးး
သင်္ကြန်တွင်းမှာ.. ဥပမာ.. အတာအိုးထိုးတယ်ဆို… အတာအိုးထဲပါရမယ့် ပန်း.. အရွက်တွေကို အတိအကျစာရင်းလုပ်ပေးပြီး.. အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်လိုက်တာမျိုး..။
အတာအိုးမှာက.. နေ့နံအရွက်/ပန်း အကုန်ပါတယ်လေ..။ အဲဒါနဲ့..သူရဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေ.. နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေ.. မသိကြတော့တာမို့.. ဘာမှန်းမသိ.. အိုးဖြစ်..ပန်းဖြစ်ပြီးရောလုပ်နေကြသူတွေတွေလာ့နေရလို့..။
နောက်.. မြန်မာတွေက.. ဘုရားပန်းတင်လေ့ရှိတယ်မဟုတ်လား..။
အဲဒီမှာ.. နေ့နံနဲ့…အဓိပ္ပါယ်လေးတွေပါ ထည့်ဆောင်းပေးလိုက်ချင်လို့ပါ..။
ဥပမာ…။ အခုအမေများနေ့..အတွက်ဆိုပါစို့…။ လက..ကဆုန်လကျနေတယ်..။
မြန်မာပြည်အတွက်.. တနင်္ဂနွေသမီးအမေကို.. ပန်းစည်းပေးမယ်..။ အမေက.. ဘုရားတင်လိုက်မယ်ဆို…
စကားဝါပန်းတွေကို.. နှင်းဆီဖြူတပွင့်ရယ်..။ Convallaria တခိုင်ရယ်နဲ့..အုန်းရွက်တရွက်.. စသဖြင့်.. ဘာညာကွိကွပေါ့..။
ဒီလိုနဲ့.. ပန်းစိုက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းသစ်တွေ.. ပန်းပြင်..ပန်းပျိုးအလုပ်သစ်တွေထွက်လာမှာပေါ့..။
အဲလိုဖြစ်စေချင်တာ…။ ကြည့်ရတာ ဗေဒင်.. မဟာဘုတ်ဆရာတွေအကူအညီလိုမယ်ထင်..။
တနင်္ဂနွေ ၁ ( အ အသံထွက် အက္ခရာများ)၊ တနလာင်္ ၂ (ကခဂဃင)၊ အင်္ဂါ ၃ (စဆဇဈည)၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၄(ယရလ၀)၊ ကြာသာပတေး ၅ (ပဖဗဘမ)၊ သောကြာ ၆ ( သဟ)၊ စနေ ၀ (တထဒဓန အသံထွက်အက္ခရာများ)
နည်းနည်းချင်းစီ ရှာလို့ရသလောက် လာလာထားလိုက်မယ်။
ပတနာက ရုံးက ပီစီ က ရွာ ပို့(စ) တွေ ဖွင့်လို့မရဘူးး
ဆာဗာကို ဂျာမဏီမှာသွားထားထားတာ..။ တခုခုများ ဖြစ်သလားမသိ.. ပြင်ကြည့်မယ်လေ..။
ကော်မန့်ပေ့(ချ) ထိ သွားလို့ရတယ်။
ပို့(စ) ကို ဖွင့်လိုက်ရင် Pop-ups Ads တွေ အများကြီး ဘာမှ မမြင်ရအောင် တက်လာတာ။
.ရွှေပန်း ဆိုတာကို… ဗမာတွေက…
( ပန်းမဟုတ်တဲ့) တခြား အရာတစ်ခုကို တင်စားပြီး ခေါ်ကြသေးတဲ့အကြောင်းလေးပါ.. မှတ်တမ်းတင်ကြပါ….လို့စ်..
ဒါလည်း.. ပန်းတို့ရဲ့သဘောပဲ..။ :haa:
အရီးပြောတဲ့ မြန်မာပန်းတွေထဲမှာ ကျတော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အတွေ့နည်းသွားတဲ့ ပန်းတွေပါတယ်။ ဥပမာ – ခွာညိုပန်း ၊ ယင်းမာပန်း ၊ ခ၀ဲပန်း ၊ သရဖီပန်းတို့လိုပေါ့။